Dhisitaanka Jaantuska Joogitaanka Jooga
Ma rabtaa in aad sii wadato joogitaanka warbaahinta bulshada gaar ahaan Twitter? Aasaas adag ayaa qaadan doonta wakhti badan iyo dadaal, laakiin Twitter waa meel aan caadi ahayn oo la yaab leh si ay suurtogal u noqoto. Waxaad dhisi kartaa astaantaada ama kordhi kartaa tirada aragtiyadaada adoo helaya isku xirnaan iyo in badan oo taageerayaal ah oo Twitter ah. Mashruucan, Artem Abgarian, oo ah Semt Maareeyaha Guusha Guud ee Macaamilka, ayaa kuu sheegi doona sida loo bilaabi lahaa suuq-geynta Twitter-ka - autokummide mã¼ã¼k.
Qalabkaaga oo dhamaystiran
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad sameysid waa dhameystirida macluumaadkaaga Twitter. Aan halkan iigu sheego in tani ay tahay tallaabada ugu horreysa ee lagu abuurayo calaamad iyo in dunidu ay ka ogtahay joogitaankaaga internetka iyo bulshada. Had iyo jeer maskaxda ku hay in Twitter uu u ogolaado isticmaalayaashiisa inuu ku xiro boggooda, sidaas darteed waa tan fursad dahabi ah inaad ku darto boggaaga internetka ama isku xirnaanta barnaamijyada ku xiran ee boggaaga si ay dadku kuugu aqoonsadaan si habboon. Waxaa intaa dheer, waa inaad ku dartaa sawir xirfad leh oo muuqaalkaaga ah si aad u isticmaashid dadka aad tahay.
La xidhiidh dadka ku nool Niche
Markaad dhameysid faahfaahintaada, tallaabada xigta waa inaad la xiriirto dadka ku jira warshadahaaga ama niche. Si aad u ogaato cidda la xidhiidha warshadaha ama beertaada, waa inaad eegtaa falanqaynta Twitter-ka oo riix batanka soo socota si aad u fiirsato liiska shakhsiyaadkaas. Plus, waxaad gacanta ku hayn kartaa dadka ku jira natiijooyinka raadinta Twitter-ka oo ka hubi sawiradooda kahor intaan la xiriirin..Habka sahlan ee lagu xirayo dadka waxtarka leh waa adoo ku soo qoraya taariikhdaada tweets maalin kasta. Waa inaad weydiisaa dhowr su'aalood oo aad isku daydid sida ugu wanaagsan si aad u soo jiidatid dad badan iyo dad badan si ay u yimaadaan oo uga jawaabaan su'aalahaaga.
Go'aaminta Wakhtiyada ugu wanaagsan ee loogu talagalay Tweet
Iyada oo ku saleysan meheradaha iyo goobaha taageerayaashaada, waxaad go'aamin kartaa waqtiga ugu wanaagsan ee loogu talagalay tweets. Isku day inaad isticmaasho labo qalab oo Twitter ah si aad suurtogal u noqoto. Tusaale ahaan, Twittersphere waa qalab wanaagsan oo ballanqaadaya in ay ku siiyaan macluumaadka lagama maarmaanka ah marka taageerayaashaadu ay yihiin internetka iyo waa maxay waqtiga ugu habboon ee tweets.
La wadaag Qodobbada qiimaha leh
Twitter wuxuu ina siinayaa fursado badan iyo wadaagida fikradaha. Waad ka faa'iideysan kartaa iyaga si aad u kordhiso tirada aragtiyadaada. Aad bay muhiim u tahay in la wadaago nuxurka qiimaha leh oo u oggolow dadkaaga inay wakhti yar akhriyaan oo ay faafiyaan mawduucaaga. Kala hadal hal jeer hal maalin oo ka jawaab su'aalahooda, ku salaysan waxyaabaha aad ka wadaagtay Twitter.
Ka qaybqaado joornaalada Twitter
Sheekeysiga Twitter waa ikhtiyaari ah in lala xiriiro dadka kale oo abaabulo waxyaabahaaga. Waa inaad ka faa'iideysataa oo aad kor u qaaddaa tirada dadka raacsan. TweetReports waa khibrad aad u fiican oo bilaash ah oo lagu isticmaalo khadka Twitter-ka kaas oo kaa caawinaya inaad kaqaybqaadato joornaalada warbaahinta bulshada. Waad sii balaarin kartaa ama tirtiri kartaa liiska kaliya si aad ula xariirtid taageerayaashaada oo isku day inaad sameyso taageerayaashaada.
Waxyaabaha kor ku xusan, waxaad ka heli kartaa taageerayaal badan oo Twitter ah waxayna kordhin karaan wacyigadaada caanka ah illaa inta badan.